News - Metal microporous ihe nwere ezigbo okpomọkụ na-eguzogide ma magburu onwe n'ibu Njirimara
gbazee blown nkụnye eji isi mee
gbazee spinneret gbazee
na-abụghị kpara akwa productin akara
mmiri gbara gburugburu-agwaetiti
spunbonded nkụnye eji isi mee
Metal microporous ihe nwere ezi okpomọkụ na-eguzogide ma magburu onwe n'ibu Njirimara
Metal microporous ihe nwere ezi okpomọkụ na-eguzogide ma magburu onwe n'ibu Njirimara. N’ụlọ dị ọkụ, ike nke microporous metal bụ ugboro 10 nke ihe seramiiki, na ọbụlagodi na 700 ℃, ike ya ka ihe dịka okpukpu anọ karịa nke seramiiki. Ezi ịdị ike na arụmọrụ ikuku nke ihe igwe microporous na-eme ka ha nwee ezigbo nguzogide okpomọkụ na nkwụsị ala. Tụkwasị na nke ahụ, ihe ndị a na-enweta n'ịnyịnya ígwè nwerekwa ihe nhazi dị mma na ịgbado ọkụ. Njirimara ndị a magburu onwe ha na-eme ka ihe ndị na-emepụta microporous nwere ihe sara mbara na ịdị elu karịa ihe ndị ọzọ microporous.
Na ụlọ ọrụ nke oge a, a na-eji ngwaahịa na teknụzụ Ultramaroporous metal. Site na ụlọ ọrụ nche nke mbụ na ụlọ ọrụ ebe a na-eji textile, ngwa nyocha na ụlọ ọrụ nzacha ikuku, wee ruo ụlọ ọrụ mgbawa dị elu, enwere teknụzụ ultra ultra microporous.
Anyị nwere akụrụngwa nhazi yana ụlọ ọrụ nyocha sitere na Germany, Switzerland, United Kingdom, United States, Italy, Japan na mba ndị ọzọ. Anyị nwere sistemụ nkwado siri ike maka nrụpụta ngwaahịa, nnwale ngwaahịa na nhazi ngwa ọrụ pụrụ iche, na-eso ndị ogbo ụwa. Anyị nwere ikike mmepe ngwaahịa siri ike na ime mgbanwe ahịa.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ngalaba nyocha na mmepe, nke nwere ike inye ndị ahịa ọrụ dị mma na mmepe ngwaahịa. Na mgbakwunye, anyị na ndị ọzọ na akara na mmụọ nke na-aga n'ihu ọhụrụ, na-agbalịsi ike na-emepụta mma ngwaahịa, iji nyeghachi nkwado nke ndị ahịa. Ka ọ dị ugbu a, ikike imepụta kwa afọ na nsonaazụ ngwaahịa nke ụlọ ọrụ anyị ruru ihe karịrị nde 30, a na-ahazi ọtụtụ puku ngwaahịa kwa afọ, nke otu narị narị ngwaahịa ọhụrụ mepụtara. N'ihi na marketable ngwaahịa na elu ahịa aha, ọ dọtara ọtụtụ ụlọ chemical eriri ụlọ ọrụ na-akwado anyị ụlọ ọrụ. Companylọ ọrụ ahụ nwere ihe karịrị ndị isi ọrụ 300 na ahịa anụ ụlọ, na ahịa ahịa ngwaahịa karịrị 50%. Ọzọkwa, ngwaahịa anyị nwere spinneret ejirila nwayọọ nwayọọ banye ahịa nke Taiwan, South Korea, Japan, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, South Asia na Europe na America, wee nwee aha ọma. O nwere ihe karịrị ndị ahịa 300 karịa mba 40, ọkachasị na India, ebe ụlọ ọrụ kemịkal kemịkalụ na-emepe ngwa ngwa, na-aza ajụjụ karịa 60% Ọnọdụ ahịa.
Post oge: Nov-07-2020
Production Usoro Of Non-kpara Fabric, Pp Non kpara Fabric Production Line, Pp Disc Myọcha, Non-kpara akwa, Non-kpara Fabric Ihe, Pp Agbaze Fụọnụ Iyo, Ngwa niile